Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ikpe, Germany bụ ka bara uru na-eleta. Nke ahụ bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga Cologne, ihe mgbe echefu mkpuru of West Germany. The ebube obodo ụgha na bịara n'ikperé mmiri nke dokwara ebube Rhine River. Ihe ọzọ bụ na, Cologne bụ etiti akụ na ụba, omenala, na njem nke West Germany.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Day Njem Site Amsterdam Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Daytrips europetravel Train Travel travelamsterdam njegharị ejegharị travelgermany nje ndi njem travelparis